Jwxo-shiil oo Lagu Arkay Isaga oo Geel la Jooga Aaga Degmada Aware – Rasaasa News
Jun 13, 2009 Jwxo, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Aware – Ogadeeniya, wararka naga soo gaadhay degmada Aware oo ka tirsan gabalka Jarar, ayaa waxay sheegayaan in todobaadkii hore bilowgiisii la arkay Jwxo-shiil oo geel aan badnayn la socda dhulka Hawdka ee u dhaxeeya magaalada Aware iyo magaalada Daroor oo labaduba ka tirsan gabalka Jarar.
Sida ay wararku sheegayaan ma jirin wax dad ah oo loo malayn karo in ay isaga la socdaan, marka laga reebo nin gadh madoobe ah o o u egg isaga una muuqday in uu Aabe u yahay iyo Haweenay aad uga da,a yar oo garab taagnayd, balse waxaa uu ahaa nin reer miyi ah oo ay aad da,i aad uga muuqato iyo waliba rafaad.
Dadka arkay ayaa waxay ahaayeen dad aad u yaqiinay isaga in badana arkay taswiirtiisa, in kasta oo ay adag tahay in la rumaysto 100%, ayaa hadan dadka maqlay arintan waxay isla dhexmarayaan magaalada Jijiga in ay aad suurto gal u tahay arintani.
Jwxo-shiil ayaan wax war ah laga helin muddo shan bilood ah, ka dib kolkii uu galay munaafaqadii ugu xumayd intii uu nool, markii uu iska horkeenay ciidamadii Jwxo, iyaga oo si khaldan loogu sheegay arimo ayna sameeyeen hadii ay ogaan lahaayeen. Jwxo-shiil waxaa uu u adeegsaday iska horkeenka ciidanka Jwxo, xubno qabiilkiisa ah oo uu hore masuul ugagga dhigay ciidanka Jwxo uuna ka mid ahaa Cabdiraxmaan Daa,uus oo ay isku laf yihiin.
Kolkii ay dhaceen falalkan naxdinta leh ayey hal mar kaliya ku timid Jwxo firidh iyo is aamin daro, waxaa bilaabatay in xubin waliba oo ka tirsanaa Jwxo uu u dhaqaaqo hortiisa. Wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in dadka ugu badan ee eegga doon doonaya in ay wax yeelaan Jwxo-shiil ay ka tirsanaan jireen Jwxo.
Kolkii uu arkay Jwxo-shiil sida uu xaalku yahay, garwaaqsadayna in uusan meelna ku badbaadaynin ayaa waxaa uu door biday in uu dib u galo hawlo ay ugu dambaysay 55 sano ka hor.
wararkan oo aad loo xaqiijinayo ayaa waxaa aynu dhawraynaa kolba wixii ka soo kordha maalmahan soo socda.
Saraakiisha Ciidamada Itobiya ee soo Galay Degmada Balanbale, Gabalka Galgaduud, Somaliya oo Gabaanadaya Odaaysha Dhaqanka